အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လက်သည်းညှပ်များထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | China Pet လက်သည်းညှပ်စက်ရုံ
ကြောင် Claw လက်သည်းညှပ်
၁။ ဤကြောင်လက်သည်းညှပ်၏ကြာရှည်ခံဓါးသွားများသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်၊ ၎င်းသည်သင်၏ကြောင်၏လက်သည်းများကိုတစ်ချောင်းတည်းဖြတ်တောက်ရန်လုံလောက်သည်။
၃။ Cat claw nail clipper သည်သင့်လက်၌လုံခြုံစွာတည်ရှိပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိခြင်း၊
၄။ ပေါ့ပါးပြီးကြောင်လက်သည်းခြေသည်းညှပ်ကိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပြုလုပ်ထားသည်။ သွားလေရာရာ၌အလွယ်တကူသယ်ဆောင်နိုင်သည်။
ကြောင်လေး၏လက်သည်းညှပ်၏ဓါးကိုသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး hypoallergenic နှင့်အကြမ်းခံပါသည်။
ကြောင်လေး၏လက်သည်းညှပ်၏လက်ကိုင်သည်ပါးလွှာသောအပေါ်ယံအဖုံးဖြင့်ပြီးဆုံးပြီး၎င်းသည်နာကျင်မှုမတော်တဆမှုများကိုကာကွယ်ရန် ၄ င်းတို့ကိုလုံခြုံစွာနှင့်သက်တောင့်သက်သာကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြောင်သံလက်သည်းညှပ်ကို Ergonomically ပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သံချပ်ကာသောသံမဏိ Semi-circular angled ဓါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပြီးသင်မည်မျှလိုအပ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်လျင်မြန်သောအာရုံခံကိရိယာမရှိပဲသွေးထွက်သံယိုမှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Professional cat cat nail scissor သည်သက်တောင့်သက်သာမရှိသောလက်ကိုင်ကိုင်တွယ်မှုများပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ပြီးမတော်တဆထိခိုက်မှုများနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းများကိုကာကွယ်နိုင်သည်။
၁။ ကြီးမားသောခွေးများအတွက်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လက်သည်းကပ်ကတ်သည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်လွယ်ကူပြီးဖြတ်တောက်မှုမှာသန့်ရှင်း။ တိကျသည်။
၂ ။ခွေးခြစ်ရာသို့မဟုတ်သံချေးပါ။ ခွေးများသည်လက်သည်းများ၌တောင်မှခွေးနှင့်သံချေးများပြီးနောက်ပိုင်းချွန်နေလိမ့်မည်။ ကြီးမားသောခွေးများအတွက်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လက်သည်းကပ်အလှဆင်ရာတွင်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့်လေးလံသောသံမဏိဓါးရှိပြီး၎င်းသည်အားကောင်း။ ကြာရှည်ခံသောချွန်ထက်သောဖြတ်တောက်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပေးလိမ့်မည်။
၃။ ချော်ခြင်းမဟုတ်သောလက်ကိုင်များသည်ကိုင်တွယ်ရန်အဆင်ပြေပါသည်။ ၎င်းသည်ခွေးကြီးများအတွက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လက်သည်းကပ်ကြေးကိုကာကွယ်ပေးသည်။
1.Pet Nail Clipper နှင့် Trimmer သည်ပိုမိုထိရောက်သောဖြတ်တောက်နိုင်မှုအတွက်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် spring-loaded clipping ယန္တရားနှင့်အတူ။
၂။ လုံခြုံရေးသော့ခတ်ခြင်း၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လက်သည်းညှပ်ကို အသုံးပြု၍ အသုံးမပြုပါကပိတ်ထားသောအခြေအနေတွင်ညှပ်ပါ
3. Ergonomic grip သည်သက်တောင့်သက်သာသက်သာစွာအသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေရန်အတွက်သင့်လက်ကိုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပုံစံပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သာမန်အားဖြင့်သင်ဖိအားကိုအသုံးပြုသကဲ့သို့သူတို့ကိုဆုပ်ကိုင်ပါ။
4. သူတို့မသုံးလျှင် Pet Nail Clipper နှင့် Trimmer ကိုပိတ်ထားသောနေရာတွင်ဓါးသွားဖြင့်ပိတ်ထားနိုင်သည်။ အံဆွဲထဲကယူတဲ့အခါသင်မတော်တဆဖြတ်မိမှာမဟုတ်ဘူး။